Soo dejisan 360 Total Security 10.6.0.1338 – Vessoft
WindowsAmnigaAntiviruses360 Total Security
Bogga rasmiga ah: 360 Total Security
360 Ammaanka Guud – antivirus dhammeystiran oo ka socda shirkadda horumarinta software Qihoo 360. Barnaamijka wuxuu ka shaqeeyaa darawal badan oo antivirus ah oo lagu baadho goobaha ay u nugul yihiin nidaamka sida faylasha muhiimka ah iyo nidaamka nidaamka, hababka socodka, barnaamijyada autorun iyo barnaamijyada muhiimka ah. 360 Ammaanka Dhammaan Amniga wuxuu internetka ku siinayaa nabadgelyo iyadoo la xakamaynayo bogagga khatarta ah, wuxuu hubiyaa faylasha la soo duubay, iyo ilaalinta iibsiyada onlineka. Qiimaha sawirka oo dhan wuxuu kuu ogolaanayaa inaad hagaajisid dhibaatooyinka xagga ammaanka, hagaajinta waxqabadka kombiyuutarka, qashin-nadiifinta nadiifinta iyo hubinta ammaanka Wi-Fi-ga oo leh hal guji. 360 Ammaanka Guud Total wuxuu si wax ku ool ah u aqoonsanayaa qalabka loo yaqaan ’malware’ wakhtiga dhabta ah iyo xayeysiisyada xayeysiiska oo aan loo fasixin, taas oo horseedi karta lumista macluumaadka shakhsiyeed. 360 Total Security sidoo kale wuxuu taageersan yahay dhowr qalab oo dheeraad ah sida nadiifinta diiwaanka, nambarka sanduuqa xisaabta, gawaarida ciyaarta iyo qalabka ransomware.
Ilaalinta isticmaalida makiinado badan
Hubinta ammaanka Wi-Fi
Waxtarka nadiifiyaha iyo nadaafad-bixiyaha
Faallo ku saabsan 360 Total Security
360 Total Security Xirfadaha la xiriira